I-Bentley Cadastre, i-Schema wizzard-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/I-Bentley Cadastre, i-Schema wizzard
Ndathetha ngaphambili yeengcamango kunye nemvelaphi yeBentley Cadastre, eyona yeso sicelo Bentley Imephu zijoliswe kumphathi wecala lokusebenzisa i-infrastructure xfm kunye nokulawulwa kwepolotiki.
Ngokombono wam (ubuntu), ukuphunyezwa kwe-Bentley Cadastre inomsi ongaphandle komhlaba xa uqala ukususela ekuqaleni, kunokuba lula kulabo abasele bazi i-Bentley Imephu okanye ubuncinane basebenzisa Microstation Geographics. Njengoko besenditshilo ngaphambili, inokunika okuninzi (ngaphezulu kwento enokulindelwa) kodwa phambi komsebenzisi oqhelekileyo izisa umbuzo wokuqala osisiseko:
Ndiyifeza njani le nto?
Njengoko kuceliwe ngabasebenzisi, i-Bentley iphumeze oko kubizwa ngokuba yi-Schema Wizard, ekhokela inyathelo ngenyathelo ekudalweni kweempawu zezinto eziza kwenziwa zigcinwe kwifayile ye-xml ebizwa ngokuba yifayile ye-schema. Nantsi into enokuthi yenziwe ukusuka kwifayile ye- Umlawuli weGeospatial, endithe ndathetha ngaphambili kwaye ngandlela-thile sinokuqwalaselwa ukuba le wizard yinkqubela ekusebenziseni umsebenzisi kodwa ke kunye nesicelo sinokwenziwa ngokwengeziwe.
Ingqiqo iyafana neyo-AutoCAD Civil 3D kwindlela yokudala izicwangciso, endithethe ngayo xa sibonisa ukwenziwa kwesihloko kunye netafile yemigama kodwa kungabi lula kangako. Masibone ke ukuba isebenza njani i-Schema Wizard
Ukuyiqala, iya ku- "Qala / zonke iinkqubo / iBentley / iBentley Cadastre / iBentley Cadastre Schema Wizard"
Emva koko iphaneli yokwamkela ifanele ivele esinika ithuba lokuqhubeka, ukukhansela okanye ukubonisana noncedo.
Kwinyathelo elilandelayo libuza ukuba yeyiphi ifayile yefayile ezakusebenza ngayo. I-Bentley ibiza "ifayile yembewu" iimpawu zefayile ezisusela kwiiyunithi zomlinganiso, ifomathi ye-engile, ukwakheka kwenqanaba (umaleko) ukuya kuqikelelo kunye nokuba ifayile iya kuba kwi-2D okanye kwi-3D. I-Bentley ngokungagqibekanga izisa iifayile zembewu esele zilungile "kwiifayile zenkqubo / kwiBentley / kwindawo yokusebenza / kwinkqubo / kwimbewu".
Ngoku, ifayile yefowuni oyicelayo kulo mzekelo yi-xml, oko kukuthi, ifayile yefowuni ye-xfm.
Kule nto kukho iifayile zembewu ku- "C: Amaxwebhu kunye neeSetingi Zonke iiNkqubo zabaSebenzi zeBentley WorkSpace Projects Examples Geospatial BentleyCadastre defaults seed schemas" kwaye ziza njengemizekelo:
Kule meko ndiya kusebenzisa i-Deafault.
Yintoni yokwenza ngokwezifiso
Ukusuka apho, ipaneli yokucwangcisa yoluhlu lwezobugcisa oluza kugcina iipakheji apho kuyimfuneko ukuchaza:
Igama lomgca we-topological, ngokuzenzakalelayo kuza "umhlaba", kule ngxaki ndiya kuthiwa "impahla"
Nceda ubuze igama le projekthi, ndiza kubiza ngokuthi "Catastro_local2"
Emva koko ubuze igama loluhlu, ndiya kuthiwa "iCadastre"
Kwaye ekugqibeleni igama lendawo yokusebenzela (indawo yokusebenzela), ndiya kubiza "ms_geo"
Iphaneli elandelayo kukuchaza iimpawu zezinto ezifakwe kumfanekiso ovaliweyo (Polygons):
Igama lomgangatho wesigaba, ndiza kubiza ngokuthi "Poligono_de_predio", ayikwamukeli abalinganiswa abakhethiweyo
Igama elikuloo ndawo, ndiza kubiza "indawo_cwangcisiwe"
Units of measure, ndiza kusebenzisa iimitha zesikwele kwaye ndiza kubiza "m2"
Emva koko unako ukongeza ezinye iinkqubo zokubhaliweyo zezibhengezo
I-Bentley isoloko igcina umsi wokusingatha imilo, njengokuba iphaneli yangaphambilini okanye "umda we-node" oyiyo ngcamango ye-centro ngaphakathi kwendawo evaliweyo yokugcina kodwa ingaba nezinto ezinqamlekileyo ngaphandle kokwenza umlo. Ngokuqinisekileyo zombini izalathisi azikwazi ukudibanisa ndawonye kwi-topology efanayo, ngoko iphaneli elandelayo kukuqwalasela i-topology linear (Iimitha):
Kwiinkcukacha zobuncwane bendiza kubabiza ngokuthi "imida"
Kwimitha ebalwe kwimida ndiya kuthiwa "ubude_bude"
Emva koko undibuza ukuba ndifuna ukuba ezo zibhalwe ziboniswe kwiijometri eziqhelekileyo
Iphaneli elandelayo kukuseta iimpawu zeengcinga zezinto ze-node-type (Amaphuzu), le nto inokudibanisa kwinqanaba elifanayo kunye ne-topology yemida kunye nemilo.
Njengaye yangaphambili, cela isicelo ukuba ufuna ukubhala ityala kunye negama lentsimi kwisakhiwo xml
Okokugqibela, ibonisa ipaneli ngeziphumo zoqwalaselo olwenziwe ukuze sikwazi ukugcina ifayile ye-schema. Masikhumbule ukuba okwangoku senze umaleko wepasile, kodwa abanye banokongezwa ngeqhosha "lokongezwa kongqimba" njengaleyo yepasile, iiperimitha zasedolophini, ubumelwane, ubumelwane, ummandla, ingingqi, icandelo, imephu njl.
Kwi-schema ndiya kuthiwa "Cadastre_local2" kwaye cinezela iqhosha elithi "Qedela"; isikrini esimnyama sibonakala ukuba sigcina yonke into kwaye sigqityiwe.
Ukuba siyajonga, ikhonkco sele lenziwe kwiprojekthi emiselweyo njengoko kubonisiwe kwimizobo. Yile nto ibisenziwa ngaphambili ngenyawo ngokudalwa kwefayile "ucf" kwaye egcinwe kwifolda yomsebenzisi ngaphakathi kwindawo yokusebenza, njengoko kubonisiwe kumzobo wesibini,
Ewe, xa ungena, iprojekthi sele ivula kwifolda eyenziweyo, ide izise umzekelo ifayile. Bona ukuba ngalo mzuzu umsebenzisi kunye ujongano sele echaziwe kwimeko yokuba sichazile.
Kwaye ulapho, ubuchwephesha obuncinci benziwe kwiphaneli elungileyo, izixhobo zeBentley Cadastre, kwaye ulungile ukuba uhambe. Iphaneli ikwaboniswa ukunxibelelana kwindawo yogcino lwedatha okokuqala.
Kucacile ukuba oku kukuphela kokusekwa kwefayile ye-schema yokusebenza neprojekthi ye-cadastral, kuyacaca ukuba uMlawuli weGeospatial angakwenza oku ngentlungu encinci kwaye ayenze ngokwezifiso kwi-sublime. Siza kuyibona ngenye imini.
Ngamafutshane, ukuphucula okuphawulekayo kwindlela yokusebenzisa umsebenzisi weBentley Imephu okanye iMicstation Geographics, ubuncinane ekudalweni kwesakhiwo se-xfm ngaphandle kokuqala ukusuka kuMlawuli weGeospatial kunye nokudala i-ucf ngexesha elinye.
Nangona kunjalo, umbuzo womsebenzisi uyaqhubeka ukuba: Ewe, ngoku kuya kufuneka wenze amaqashiso? kuba kule, indlela ezenziwa ngayo iincwadana ziyawa, zijolise kwiifestile hayi ngqo kwiinkqubo.
Uhlala ufunda konke akwenzayo kumbono womsebenzisi malunga nemigangatho yeengqondo kunye nezinye iimpawu ezisisiseko zeBentley Imephu ezifana nokuhlalutya indawo okanye ukuhlalutya.
Sawubona Agustín, usasetyenziswa xfm?
Agustin Ortega uthi:
Okwangoku, nangona oko kuphelelwe lixesha ukusukela kwiziko eliwukhuthazayo, akukho mntu uwuqondayo lo mbandela ... ndiyazilungisa ngokwam, nangona ndinomdla ...
Aha qabane, ixesha ungakhange uve kuwe. Ngaba usasebenzisa iprojekthi eyenziwe kwi-xfm?
Molo G! ... besele ndifuna ukwazi ukuba zenziwe njani iimephu ze-xfm ... isifundo sigqibelele ...
Hambisa iimpawu ukusuka kwiiGographics ukuya kwiBentley Imephu